မင်္ဂလာပါ။ သာလွန်အောင်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ နည်းပညာများကို လေ့လာသင်ယူရင်း တတ်နိုင်သမျှ စုစည်းပြီး မှတ်တမ်း ပြုလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်လာသူအပေါင်း ကောင်းသောလိုအင် ဆန္ဒများ မြန်မြန်ပြည့်ဝ ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mi Logo မှာရပ်နေသော Mi Phone များ ကိုဆယ်တင်နည်း
Mi Phone တွေနာမည်ကြီး လို့ ၀ယ်သုံးဖြစ်တယ်။ ကလိဖြစ်တယ်။ Firmware ကျ သွားပြီး Recovery တောင် ၀င်လို့ မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ Fastboot Mode တော့ဝင်လို့ရသေးတယ်။
Fastboot Firmware လည်းအဆင်သင့် မရှိ၊ စာမေးပွဲလည်း နီးနေတော့ Phone ၀ယ်ထားတဲ့ Mi Store မှာ Firmware တင်ဖို့ သွားပေးထားတာ ၁ ပါတ်ကြာသွားတယ်။ Firmware တင်လို့မရတော့ဘူး။ Hardware ထိသွားတယ်။ လဲဖို့ပစ္စည်း မရှိဘူး၊ ပြန်လာယူပါလို့ဖုန်းဆက်လို့ သွားယူပြီး ကလိလိုက်တာ ကောင်းသွားလို့ ကျွန်တော့်လို ဖြစ်နေသူများ အတွက် ပြန် ရှယ်တာပါ။
ကိုယ့်ဟာကို ပြန်တင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး Fastboot Firmware ကို နာမည်ကြီး Software ဆိုင်တွေမှာ လိုက်ရှာတာ မရတော့ ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ပဲ MB 800 ကျော်ကို ဒေါင်းရတာပေါ့ဗျာ။ Fastboot Firmware ဒေါင်းပြီးတော့ တင်တာ မရဘူးဗျာ Mi Logo မှာတင်ရပ်နေတာ။ မကျေနပ်တာနဲ့၃/၄ ခါလောက်တင်ကြည့်တယ်။ Mi Logo မှာပဲရပ်နေတာ။မရဘူး။
ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Google ကိုပဲအားကိုးပြီး ပြန်တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။
ကဲ Firmware တင်ဖို့စမယ်ဗျာ။
၁။ သက်ဆိုင်ရာဖုန်း အမျိုးအစားရဲ့ Recovery.img
၂။ သက်ဆိုင်ရာဖုန်း အမျိုးအစားရဲ့ Fastboot Firmware
၃။ Universal Adb Driver
၄။ MiFlash Tool
၅။ Windows Computer
လိုအပ်တဲ့ Software တွေရပြီဆိုရင်-----
၁။ Universal Adb Driver ကို windows မှာ install လုပ်ပါ။
၂။ MiFlash Tool ကိုwindows မှာ install လုပ်ပါ။
၃။ Recovery.img ကိုတင်ပါ။
၄။ Fastboot Firmware ကို MiFlash Tool ဖြင့် တင်ပါ။ Restart ကျပြီး သွားရင် Firmware ပြန်တက်လာပါပြီ။
အဓိကသော့ချက်ကတော့ Recovery ပျက်သွားလို့ပါ။ ဒါကြောင့် Recovery.imgသွင်းပြီး ပါက Recovery ကနေ zip ဖိုင်ကို Flash ရင်လည်းရပါတယ်။ စာမေးပွဲပြီးမှလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်တင်ပေးပါမယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကလိတဲ့သူများနဲ့ Service သမားတွေ သိပြီးလုပ်တတ်ပါပြီ။
ဒီ Post ကို Mi Store က Service သမားတွေဖတ်စေချင်ပါတယ်။ Mi Store မှာ ရေးထားတာလေး တစ်ခုက Firmware တင်ရင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်တဲ့။
Mobile Internet Data Usage ကိုလျော့ချနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေပါ။
Settings ပိုင်းမှာတော့ Android Version ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်.
Windows 8.1 Pro & Enterprise Build 9600 Activate လုပ်နည်း
ကျနော်မြို့ရောက်လာတာနဲ့ Windows 8.1 Build 9600 ထွက်နေတာနဲ့ကြုံလို့ကလိဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်လိုပဲ Windows 8.1 Build 9600ကိုကလိချင်တဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက်Activateလုပ်နည်းလေး တစ်မျိုးကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။Skypeနဲ့Activate မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီနည်းလေးကိုရေးတင် လိုက်တာပါ။အရင်ဆုံးအောက်ကဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး winrar နဲ့ဖြည်လိုက်ပါ။
Download windows 8.1 Activator ၁။ ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက Winact 1.4.1 ကို Right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် Options ကိ်ုနှိပ်ပါ။
၂။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် Unistall product key ကိ်ုနှိပ်ပါ။
၃။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် OK ပေးပြီး Box တွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါ။
၄။ပြီးရင်ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Windows အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး Pro x32 ဆိုရင် ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက Professional x32 Folder ကိုဖွင့်ပြီး A9600E Batch File ကို Right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ။ ( Enterprise x64 ဆိုရင် ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက Enterprise x64 Folder ကိုဖွင့်ပြီး A9600E Batch File ကို Right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ။ )
၅။ ပြီးရင် Computer ကို Restart ချပြီး Internet နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ Auto Activated ဖြစ်သွားပါတယ်။ ( လိပ်တဲ့ကိုနှေးတဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Phone Internet နဲ့ လည်းချိတ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ (Add features to Windows 8.1 ကတော့ထည့်လို့မရပါဘူး၊ Product Key တောင်းပါတယ်။ Add features to Windows 8.1 ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ Windows Media Center လေး ပေါ်လာပါတယ်။Windows 8.1 Pro ကနေWindows 8.1 Pro with Windows Media Center ဖြစ်သွားပါတယ်။မြန်မာစာတမ်းထိုး ကိုရီးယား ကားတွေကြည့် လို့ရတာပေါ့။ Product Key ၀ယ်ချင်ရင်တော့ us$40 လောက်ကနေ us$100လောက်ထိ ပေးရမှာပါ။ Windows Media Center ကလွဲလို့ကျန်တာအကုန် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။) (အဆင်ပြေရင်Windows 8.1 Product key Finder နဲ့ Key ရှာပြီး လုပ်နည်းလေးလည်းရေးပေးပါ့မယ်။ ကံကောင်းရင်တော့ တည့်သွားမှာပါ။ ) မကြာခင်တော့ Activator တွေထွက်လာမှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ဒါလေးနဲ့ပဲကျနော်တော့ သုံးနေတယ်။
၆။ ပြီးတော့ အောက်ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း WaterMark တွေကိုဖြောက်ချင်ရင် ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက My WCP Watermark Editor ကို Right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ။ Remove all wathermark "Remove all wathermark"Check the box ထဲမှာ အမှန်လေးခြစ်ပြီး "Apply new settings" ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Run နေတာကို ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် စာတမ်းတွေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပြန်ဖော်ချင်ရင် My WCP Watermark Editor ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ဖြောက်ချင်တဲစာကိုဖြောက်ပြီး ပေါ်ချင်တဲ့စာတွေကို လည်း ပေါ်အောင် Edit လုပ်လို့ရပါတယ် ။ ကလိကြည့်ပါ။ English လိုလည်းအညွှန်းပါပါတယ်။
၇။ Windows 8.1 ရဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SmartScreen နဲ့ Sensor Device Driver တွေအကြောင်းကိုတော့ အဆင်ပြေရင် ဆွေးနွေးပေးသွားပါ့မယ်။
၈။ သတိထားရမှာက Microsoft Office ကို KMS Service နဲ့ Activate လုပ်ရင် SmartScreen ကိုပိတ်ထားမှရမှာပါ။ SmartScreen ကသူ့အလိုလိုတော့ မပွင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဖွင့်မှရတာပါ။
Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ထည့်ရအောင်
Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ပါမလာဘူးဗျာ။ Hibernate ကလည်း အသုံးတည့်တယ်မဟုတ်လား။
Microsoft .NET Framework 3.5 လိုပေါ့ ။ Microsoft ကလည်း အသုံးပြုသူ အဆင်ပြေ အောင်တစ်ခါထဲ ထည့်မပေးဘူးဗျာ။ ဘာသဘောလဲ မသိဘူး ။ ကြုံရင်မေးကြည့်ကျပါဦး.. ဒီတော့ကျနော်က Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ကိုဒီလိုထည့်လိုက်တယ်.. ၁။ Control Panel >> Hardware and Sound >> Power Options ကိုသွားပါ။ Choose what the power buttons do ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဘေးနားကမြှားလေးကို Click ထောက်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါ။ Hibernate နေရာမှာ အမှန်လေးခြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Save changes ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Read More
Windows 8.1 ကို Online မှာ Activate လုပ်ခြင်း
ကျနော် မြို့ကို ခဏ ရောက်တုံး Windows 8.1 Pro with Media Center Build 9471 လေးကို ဒေါင်းပြီး ကလိကြည့်ပါတယ်။Media Center ပါတော့ မြန်မာစာတမ်းထိုး ခွေတွေကိုကြည့် လို့ရတာနဲ့ ဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်။အောက်တိုဘာ (၁၇) မှာတော့ Windows 8.1 ကို Microsoft က update ပေးမှာပါ။Build ....ကတော့ ဘယ်လောက်ဖြစ်မလည်းမသိဘူး။ ထွက်လာမှပဲသိရမှာ။Windows 8.1 ကို Activate လုပ်ရအောင်-၁။ Computer ကို Internet ချိတ်ဆက်ထားပါ။ Control Panel >> System and Security >> Windows Update ကိုသွားပါ။ Add features to Windows 8.1 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ I already haveaproduct key ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ Enter your Key နေရာမှာ အောက်ကပေးထားတဲ့ Key (၂) ခုထဲက တစ်ခုခုစမ်းထည့်ကြည့်ပါ။ Product Key: NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F Product Key: MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7 Next ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ I accept the license terms ကိုအမှန်ခြစ်ခဲ့ပါ။ Add features ကိုနှိပ်ပါ။ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ Install လုပ်ပြီးသွားရင်ရပါပြီ။
၅။ My Computer ကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Windows is Activated ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဒီလိုမရ ရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါ-Local Disk (C:) (window တင်ထားတဲ့ အပိုင်းပါ) >>Windows >>System32>>slui ကိုသွားပါ။Slui ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Product Key နေရာမှာပေးထားတဲ့ Key (၂) ခုထဲက တစ်ခုခုစမ်းထည့်ကြည့်ပါ။ပြီးရင် အညွှန်းအတိုင်းဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ။ Windows is Activated ဖြစ်မှသာ Personalize ကိုပြင်လို့ ရမှာပါ။အထူးသတိပေးချက်Microsoft Office 2013 ကို Activate လုပ်ရာမှာ KMS Nano လို Automatic Activator တွေနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့။သူက Windows8 Activate အတွက်ပါ ပါလို့ပါ။Windows Activate ပျက်သွားပါတယ်။ Microsoft Office 2013 ကိုသီးသန့် Activate လုပ်တဲ့ Activator တွေနဲ့ပဲလုပ်ပါ။ှQEMU(KmsMicro) လို Manual Activator တွေနဲ့ပဲလုပ်ပါ။Microsoft .NET Framework 3.5 ကိုတော့ ကျနော်ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေထဲကအတိုင်းတင်လို့ရပါတယ်။Windows 8.1 Preview ကိုမသုံးချင်ဘူး။ Windows 8.1 အစစ်သုံးချင်တဲ့ သူများ စမ်းကြည့်နိုင်အောင်ပါ။ဒေါင်းချင်ရင်ဒေါင်းလို့ရအောင် Torrent ဆိုဒ်လေးကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
64 bit ဖြစ်ပါတယ်။ 32 bit ကိုလိုချင်ရင်တော့ Google မှာရိုက်ရှာပြီးဒေါင်းနော်။
(၂) Windows 8တုန်းကတော့ Accountထဲကို ၀င်ဖို့အတွက် Sing in လုပ်ဖို့ လိုအပ်သေးပြီး နောက်မှ Emailနဲ့ အခြားအရာတွေကို ၀င်ကြည့်နိုင်တာပါ။ Multiple Accountကို အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Start Screenကို Swipeလုပ်ပါ။ Tap
Settingထဲ ထပ်ဝင်ပြီး Change PC Settingsကို ရွေးချယ်ပါ။ နောက်ပြီး Accountsကနေ တစ်ဆင့် Other Accountကို ထပ်မံရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) သင် လက်ရှိ အသုံးပြုထားတဲ့ Appတွေ
Windowsတွေ အားလုံးကို အလွယ် တကူ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Screenရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းကို Swipeလုပ်ပြီး နောက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုပါ Swipeထပ် လုပ်လိုက်မယ်
ဆိုရင် သင့်ကြည့်ချင်တဲ့ App Listတွေ အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်မှာပါ။
(၅) Microsoftရဲ့ Windows 8.1အပေါ်မှာ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားချက်က Startခလုတ် ပြန်လည် ထည့်သွင်းထားမှာ ဖြစ်ပြီး Taskbarလည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Taskbarပေါ်မှာ Menuတစ်ခု ပေါ်လာသည် အထိ Touchလုပ်ထားနိုင်ပြီး
နောက် Propertiesကို ရွေးချယ်ပါ။ နောက်ပြီး Use Peekကို ရွေးချယ်ပြီး Taskbarပေါ်မှာ Desktopခလုတ် ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
From: လေရူးသုန်သုန် Read More
ဒါလေးက Android apk တွေကို ကွန်ပျူတာမှာ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း မူရင်း Icon ပုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ apk ကိုရွှေးရတာ လွယ်တာပေါ့။ Install လုပ်ပုံလေးကတော့- ၁။ mzwPC Installer လေးကို Double Click လုပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာလေး ကို နှိပ်ပါ။
၂။ ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာလေးကို ပဲဆက်နှိပ်ပါ။
၃။ အောက်ကအတိုင်း Box လေးတစ်ခုထပ်ကျ လာရင် YES,NO တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ NO ကိုပဲရွှေးလိုက်ပါတယ်။
၄။ ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာလေးကို ပဲဆက်နှိပ်ပါ။ ပွင့်လာတဲ့ Program ရော IE Browser ကိုရောပိတ်လိုက်ပါ။ (ရှုပ်နေလို့လေ)
၅။ ပြီးရင် Android apk တွေ သိမ်းထားတဲ့ ကွန်ပျူတာထဲက Folder ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ မူရင်း Icon ပုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ တခြား Function တွေလည်းပါပါတယ်။ ကလိကြည့်ပေါ့။ အောက်ကမူရင်းလင့်မှာပဲသွားဒေါင်းလိုက်နော်။ 12.7MB ရှိပါတယ်။
http://www.muzhiwan.com ကျနော်ပြထားတဲ့နေရာလေးကို နှိပ်ပြီးဒေါင်းလိုက်ပါ။
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ- လိုင်းမကောင်းသည်ကတကြောင်း၊ ကျနော်ရဲ့ကွန်ပျူတာ Hard Disk ကော External Hard Disk ကော ကြွသွားသည်က တကြောင်း၊ ကျနော်တောရောက်နေသည်က တကြောင်း
ပိုစ့်မတင်ဖြစ်ခြင်း၊ မေးထားသည်များကိုပြန်မဖြေဖြစ်ခြင်း၊ လင့်သေသွားသည်များကို ပြန်မတင်
ဖြစ်ခြင်း တို့ အတွက် တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပြန်လည် ပြီး ပိုစ့်များ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Mobile Phone ရဲ့ Internet Speed က ရန်ကုန်၊
မန္တလေး၊ နေပြည်တော် လောက်ပဲကောင်းတော့ တောမှာ ဘာမှလုပ်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Mobile Phone ရဲ့ Internet Speed မြန်မာ
တစ်နိုင်ငံလုံး ကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြရင်းနဲ့ ကျနော်
ကိုလည်း မြို့ကိုမြန်မြန် ပြန်ရောက်အောင်လည်း ဆုတောင်းပေးကြပါဦး။
Windows 8 သည် Windows7လောက်မအောင်မြင်ရခြင်းမှာ .Net 3.5 ကို သီးသန့်Install ပြန်လုပ်ရခြင်းသည် လည်းတစ်ခု အပါအ ၀င်ဖြစ်မည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။
ယခု Windows 8 တွင် Microsoft .NET Framework 3.5 ကို Offline Installer လေးနဲ့ Install လုပ်နည်းကို မျှဝေ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ windows 8 အခွေ (သို့) windows 8 ထည့်ထားတဲ့ Usb Stick ကိုတပ်လိုက်ပါ။ (Windows ခွေ (သို့) Usb stick ထဲမှာရှိတဲ့ Windows ဟာ Windows အများကြီးပါတဲ့ all in one ခွေမဟုတ်ပဲ Windows 32bit ဆို Windows 32bit ၊ Windows 64bit ဆို Windows 64bit တစ်ခုတည်းဖြစ်မှသွင်းရတာအဆင်ပြေမှာပါ။)
၂။ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ။
၃။ Select Windows 8 Installation Media (Virtual) Drive အောက်မှာ windows 8 အခွေ (သို့) windows 8 ထည့်ထားတဲ့ Usb Stick ရဲ့ Drive Letter ကိုရွှေးပေးလိုက်ပါ။
ကျနော်ရဲ့စက်မှာကတော့ Drive Letter (D) ပေါ်တဲ့အတွက် (D) လို့ရွှေးပေးလိုက်ပါတယ်။ စက်တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကတော့ Drive Letter ပေါ်တာတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၄။ ပြီးရင် Installation Source နေရာမှာ Browse ကိုနှိပ်ပြီး Drive Letter (D) အောက်က sources >>sxs ဆိုတဲ့ Folder လေးကို ရွှေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လုပ်လိုက်ရင်ရမှာပါ။
၅။ ပြီးရင် .NET 3.5 ကို Windows 8 မှာ Offline သွင်းရအောင် ဆိုတဲ့ ပိုစ်ထဲက အဆင့်(၆) နဲ့ အဆင့် (၇) အတိုင်းဆက်လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ Drive (C ) ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Drive (D) ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Drive တစ်ခုခုထဲမှာ sources ဆိုပြီး Folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒီ Folder ထဲကို sxs Folder လေးကိုကူးထည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ Drive (C ) ထဲမှာထည့်လိုက် ပါတယ်။ အဲဒီ Folder က 276MB လောက်ရှိပါတယ်။ (ကျနော်က တော့ sxs Folder လေးကို ကူးပြီး သိမ်းထားတယ်။ ဘယ် Windows 8 အခွေပဲ တင်တင် အဆင်သင့်ရအောင်လို့ပါ။) ပြီးရင် Drive Letter ပြောင်းပြီးသွင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
(Software မသုံးပဲ Administrator: Command Prompt Box ထဲမှာ Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:C:\_sources\_sxs /LimitAccess လို့ ရိုက်ထည့်ပြီးသွင်းရင် လည်းရပါတယ်။) ကျန်တာကတော့ .NET 3.5 ကို Windows 8 မှာ Offlineသွင်း ရအောင် ဆိုတဲ့ ပိုစ်ထဲက အဆင့်(၆) နဲ့ အဆင့် (၇) အတိုင်းဆက် လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။
Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer ကိုအောက်မှာယူလိုက်ပါ။ 87KB ပဲရှိပါတယ်။
Android phones နဲ့ Tablets များအတွက် thalunaung apk download
အကျိုးရှိတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ၀င်ကြည့် ဖို့ Thalun Toolbar ကိုသုံး ကြည့်ပါ။
Windows7အတက်မြန်အောင်
Windows7အတက်အရမ်းနှေးနေရင် အတက်မြန်အောင် အောက်ကအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ။ ၁။ Desktop ပေါ်က My Computer ကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ကို ...
စိတ်ဓာတ် ကျနေပြီ လားဆိုတာ သိ နားလည် စေဖို့ အောက်ပါ လက္ခဏာ တွေ ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သင်ခံစားနေရ တဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာကြောင့် ပုံမှန်အလုပ...
ကျွန်တော့် ဘလော့မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသုံးတည့်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Virus အကြောင်းနဲ့ virus ရှင်းနည်းတေ...
Microsoft Office 2013/ Office 365 Customer Preview
Microsoft Office 2013/ Office 365 Customer Preview Microsoft Office 2013/ Office 365 Customer Preview ကိုသုံးကြည့် လိုပါက http://www....
mzwPC Installer ဒါလေးက Android apk တွေကို ကွန်ပျူတာမှာ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း မူရင်း Icon ပုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင...
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတ အဖြာဖြာ ၂၀၁၂
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ အောက်မှာယူလိုက်ပါ။ Download mediafire.com ...
WD english-myanmar dictionary
English to myanamr dictionary ပါ။ လိုချင်ရင်ပေါ့လေ။ တွေ့လို့ဆွဲထားတာ ပြန်မျှတာပါ။ အဆင်ပြေမှာပါ။ အားပေးမှု့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ...
မြန်မာနာမည် VIRUS များ ရှင်းလင်းရန် နှင့် SOFTWARE များ.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုလည်း အထင်သေးလို့မရတော့ဘူးဗျ.။ အိုင်တီနည်းပညာတွေကို အမှီလိုက်နိုင်လာ ရုံမက တချို့က အများကောင်းကျိုးအတွက်...
Theme ရေးပြီးဒေါ်လာ တစ်သန်းရသူ။
ဒီအငျတာဗြူးကို ကိုဇျောရဲမွငျ့ညှနျးတာကွောငျ့ ရောကျသှားပွီး ဖတျဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို ဖတျဖွဈတော့ ဒီကလူငယျတှဖေတျမိရငျ ကောငျးမှာပဲလို့ တှေးမိပွီ...
thalunaung@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ခင်မင်တယ်ဆိုရင် LIKE လုပ်ခဲ့ပေးပါ။
Copyright © 2011 သာလွန်အောင် | Powered by Blogger